Vaovao - Ahoana ny fitazonana excavator sy siny kely
Ahoana ny fitazonana excavator sy siny kely
(1) .Fanomanana alohan'ny hampiasana ny excavator
1. Fanaraha-maso ny menaka telo sy ranoka iray: menaka hydraulic, menaka motera ary solika diesel, indrindra ny solika sy solika hydraulic, izay tsy maintsy mahafeno ny fenitra voatondro nataon'ny mpanamboatra. Ny coolant dia tsy maintsy atao anaty fanjakana mahavoky, ary zahao ny rafitry ny fampangatsiahana raha misy fivoahana.
2. Aiza no mila ampiana menaka (dibera) dia tsy maintsy fenoina manontolo ny menaka.
3. Ny loto sy ny fako ao anaty ny crawler dia tokony diovina araka izay azo atao. Aorian'ny fanadiovana dia tandremo ny fihenan'ny crawler ary ampio menaka mifanaraka amin'ny fenitra mba hiantohana ny fampiasana ara-dalàna ny mekanika mandeha.
4. Raha ny nify siny sy ny nify sisiny no nitafy mafy, dia tokony hosoloina ara-potoana izy ireo mba hiantohana ny hery fitrandrahana ara-dalàna ao amin'ny mpitrandraka.
(2). Toerana tokony homarihina amin'ny fampiasana excavator
1. Aorian'ny fanombohana ny excavator dia avelao ny motera hazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha ambany ary tsy misy enta-mavesatra mandritra ny vanim-potoana (miankina amin'ny mari-pana ny halavan'ny fotoana), ary miandry ny hafanan'ny motera vao hitombo tsara alohan'ny hanaovana ny fihadiana enta-mavesatra be .
2. Alohan'ny fitrandrahana, ny hetsika mahazatra rehetra momba ny excavator dia tokony ampiasaina tsy misy enta-mavesatra hijerena ny tabataba tsy mahazatra sy ny endrika tsy mahazatra.
3. Rehefa mitrandraka dia tokony hampiasa fihetsika mihady sy manara-penitra ny mpitsongo mba hamaritana ny tanjaka fitrandrahana farany ambony, ary koa hampihena ny fahaverezan'ny ampahany ara-drafitra.
4. Rehefa miasa mandritra ny fotoana maharitra ny excavator dia tokony hanamarina ny rafitra tsirairay, indrindra ny fikojakojana ireo singa mandrafitra azy, hitandrina ireo ampahany mila hosorana ao anaty fe-potoana iray, ary mila ampiana ny menaka ( asaina manamarina ianao ary asio 5-6 ora).
5. Raha toa ka somary ratsy ny toe-piainan'ny asa (fotaka, tsimparifary, tanimanga, sns.), Ny fako dia tokony hodiovina ara-potoana mba hiantohana ny fiasan'ny excavator mahazatra, indrindra ny motera no tena ilaina ary tsy tokony hisy potipoti-javatra manodidina ny motera mba hiantohana ny fanaparitahana hafanana ara-dalàna ny motera.
Fotoana fandefasana: Jun-16-2020